HomeHealth BlogNov 2019दिमागमा क्यान्सर: सकारात्मक सोचले तपाईंलाई स्वतन्त्र सेट गर्न सक्दछ
"सकारात्मक सोचाइ, आफैंमा धेरै दबाब नदिई र तपाई वास्तवमा क्यान्सरमुक्त हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दै, तपाईको सामान्य जीवन जस्तो खुशीयाली जीवन बिताउनु नै क्यान्सरबाट मुक्त हुने चाबी हो।" यस प्रकार म्यानमारका पूर्व विश्वविद्यालय प्राध्यापक, टिन मे ल्विनले होराइजन क्षेत्रीय क्यान्सर सेन्टरमा छातीको क्यान्सरको उपचारमा उनको खुशीयालीले भरिए।
टिन मे ल्विनले २००९ सम्म यानगुन (युसीएसवाई) कम्प्युटर अध्ययन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक थिइनन्, जब उनले आफ्नो शरीरमा केही अनौंठो महसुस गर्न थालिन्। सुरुमा उनले सोचे कि उनको स्तनको छेउमा सिस्ट थियो, जुन उनले परम्परागत जडीबुटी उपचार प्रयोग गर्ने प्रयास गरे। सुरुमा, यो सफल देखिन्छ, जब विकास अदृष्य हुन थाल्छ, तर पछि यो लगभग एक वर्षको लागि अस्थायी रूपमा फिर्ता आयो। अन्तमा, उनका एक सर्जन मित्रले उनलाई विस्तृत स्वास्थ्य जाँचको लागि विश्वस्त गराए जसले गर्दा उनलाई स्तन क्यान्सर भयो।
यो अनुमान गर्न सजिलो हुन्छ कि यो उनको लागि ठूलो झटका हुनेछ, उनलाई विश्वविद्यालयमा उनको कार्यकाल छोड्ने बाध्यता। तर उनले यसलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो प्रगतिमा लिइन्, उनी केवल बिल्कुल बिरामी छैन भन्ने विश्वास गर्न छनौट गर्छिन्। “पक्कै पनि, चिठ्ठा र डिस्चार्जको कारणले मलाई थाहा थियो कि ममा केही गडबडी छ। तर अन्ततः मलाई स्तन क्यान्सर भएको पत्ता लागेपछि यस अनौंठो कुरा देखेर मलाई अचम्म लाग्यो। ”उनले हामीलाई उनको सकारात्मक मनोवृत्तिको बारेमा बताइन्। “म कहिल्यै बिरामी भएको छु भनेर सोच्न पनि छोडेको सट्टा, म अनुभवको नयाँपनबाट बढी मोहित भएँ। "म बिरामी छु, वा मलाई क्यान्सर भएको छ" जस्तो सोचाइले मैले आफुलाई दबाब दिएन किनभने मलाई यो राम्रोसँग थाहा थियो कि यो टाढा जान्छ। ”
एक वास्तविक जीवन रिटेल थेरापी
“मेरा साथीहरूले मलाई थाईल्याण्डमा उपचार खोज्नु पर्छ भनेर बताए जसले मलाई तुरुन्तै राम्रो महसुस गरायो। मैले बुमरुनगारद ख्याति सुनेको थिएँ त्यसैले यसबारे चिन्ता लिनु पर्दैन। यसबाहेक, थाइल्याण्डमा उपचार भैरहेकोमा मलाई साँच्चिकै उत्साहित बनाउने कुरा भनेको बैंककमा किनमेल गर्ने मौका थियो। मलाई यो शहर मन पर्छ! मलाई यहाँ पसल आउन मन पर्छ। ”
यद्यपि उनको दिमाग सहज थियो, उनको उपचार बिना चुनौतीहरू थिएन। ती मध्ये एउटा चुनौति हो कि क्यान्सर उसको हड्डीमा कसरी छिटो फैलियो। उनको उपचारको निरीक्षण गरिरहेका आन्कोलोजिस्ट डा. विनाइ अर्यप्रकायले केहि भनेकी थिइन जुन उसले आशा गरेन।
“डा. विनाइले मलाई क्यान्सर मेरो लिम्फ नोड र हड्डीहरु मा फैलिएको थियो कि मलाई भन्यो।उसले बाँच्नको लागि मलाई छ महिना दिए। मैले मान्नु पर्छ कि म केही चकित भएँ, तर म डराएको थिएन। जे भए पनि, म यसमार्फत जाँदैछु। ”
केही जित्नुहोस्, केही हराउनुहोस्
“मैले प्राप्त गरेको हेरचाह दोषरहित थियो, वास्तवमा यो एकदम पेशेवर थियो। नर्सहरूले मलाई गर्ने व्यवहार र दुभाषाहरूको प्रभावकारिताले मलाई राम्रो हातमा भएको महसुस गरायो।” टिन मे ल्विनले भने। उपचार केमोथेरापीको ३ चक्रबाट शुरू भयो, जसमा शल्यचिकित्सकले उनको शल्यक्रिया गर्न पर्याप्त अवस्थालाई स्थिर पार्न तीन पटक केमोथेराप्यूटिक एजेन्टहरू परिवर्तन गर्नु आवश्यक पर्‍यो।
“म उपचारको लागि आफैंमा पूर्ण प्रतिबद्ध छु र डाक्टरहरूमा पूर्ण भरोसा राख्छु। यद्यपि डाक्टरहरूले सफलतापूर्वक क्यान्सरयुक्त ट्यूमर हटाए, र रेडिएसन थेरेपीले अपेक्षा गरे जस्तो गरी, छालाको कलम अझै आवश्यक पर्‍यो, जुन उनीहरूले मेरो पेटबाट छालाको प्रयोग गरेर समाप्त गर्दछन्।दुर्भाग्यवस, छालाको भ्रष्टाचार उपचार प्रक्रियाको क्रममा मेरो अन्य स्तन पनि हटाउनुपर्‍यो। ”
सहज मनले रोगलाई निको पार्छ
उच्च आत्मालाई कायम राखेर र आफुमा अनावश्यक दबाब नबनाई पूर्ण उपचारको लागि प्रतिबद्ध भएर, टिन मे ल्विनले आफ्नै उपचारको सफलतामा ठूलो योगदान पुर्‍यायो। “मलाई लाग्छ हाम्रो मानसिक अवस्था उपचार प्रक्रियाको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यदि हामी विश्वास गर्दछौं कि हामी निको हुनेछौं, तब हामी निको हुनेछौं। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंले बनाउनु हुन्न भने, तपाईंले थाल्नु हुन्न,” उनी आफ्नो चरित्रात्मक निच हाँस्दै भन्छिन्।
“मैले सुखी जीवन बिताउने छनौट गरें। यद्यपि त्यस समयमा म हृदय रोग र मधुमेहबाट पनि पीडित थिएँ, मैले उनीहरूलाई मेरो खुशीको फाइदा लिने अनुमति दिएन। अस्पतालमा मेरो उपचारबाट स्वास्थ्यलाभ भइरहेको बेलामा पनि नर्सहरूले मलाई अस्पताल नजिकै कतै शपिंग लिन लैजान बिन्ती गर्थे! ”
टिन मे ल्विनले अरू बिरामीहरूलाई भनेको कुरा यो हो: क्यान्सर आफैँलाई नदिनुहोस्। यो त्यहाँ छ भन्ने तथ्यलाई व्यवहार गर्नुहोस् र यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुहोस्। त्यसो भए, डाक्टरले भनेको जस्तै गर्नुहोस् र यसलाई अर्को विचार नदिनुहोस्। टिन मे ल्विनले उक्त रहस्यमा अन्तर्वार्ताकारलाई उनको अनुहारमा षड्यन्त्रकारी मुस्कानका साथ जान दिए, उनी यूरोपको शपिंगबाट भर्खर आइसकेकी छिन् भनेर।